Izibonelelo zegalikhi: ukutya ongenakukuphosa kwindlela otya ngayo | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uyazazi izibonelelo zegalikhi? Nangona ingayonwabeli eyona nto idumileyo xa kufikwa ekuphefumlweni, Kukutya ekufuneka kubandakanywe kukutya ukuze kungcamlwe (kubalulekile kwi Cuisine yaseMeditera) kunye neepropathi zayo.
Okwangoku ekudleni koluntu amawaka eminyaka, izibonelelo zegalikhi azizange ziqapheleke eGrisi naseRoma, apho igalikhi yayisetyenziswa njengeyeza kwiimo ezahlukeneyo. Makhe sibone ukuba kutheni kuthathwa njengokutya okusempilweni.
1 Izizathu zokutya igalikhi
1.1 Ngaba igalikhi iyalwa neentsholongwane?
2 Indlela yokulwa nomphunga ombi kwigalikhi
3 Igama lokugqibela
Izizathu zokutya igalikhi
Wonke umntu uyazi ukuba i-vampires iyayicaphukela, kodwa ngaphandle kwengxabano yokucinga kunye nezidalwa zasebusuku, zininzi ezinye izizathu zokubandakanya iintloko ezimbalwa zegalikhi kwinqwelo yokuthenga. Kwaye ikonofile inegama elihle xa kuziwa kwezempilo. Ukutya igalikhi kulungile kuba kuyanceda ukuthintela izifo.
Zenziwe ngantoni igalikhi? I-Garlic, phakathi kwezinye izinto, ikunika i-allicin, i-arginine, i-flavonoids, i-vitamin C kunye ne-selenium. Ezi yimixube esebenza ngokudibeneyo kwaye ngokwahlukeneyo emzimbeni wakho ukufaka isandla ekusebenzeni kakuhle kwenani elikhulu leendawo zalo. Kodwa Unokukuxhamla njani ukusebenzisa igalikhi rhoqo?
Igalikhi inezinto ezinomdla zokulwa neentsholongwane
Ngamana ungathoba uxinzelelo lwegazi ngokunceda ukugcina imithambo ibhetyebhetye kunye nokuphucula ukuhamba kwegazi
Amanqanaba echolesterol anokuhla
Inokwehlisa amanqanaba eswekile yegazi, iyenza ukuba inike umdla ngakumbi kubantu abane iswekile
Uthintela amahlwili egazi kunye nokwakha iipleyiti kwimithambo
Ngokuhambelana Enye yeenzuzo ezibonakalayo zegalikhi kukunciphisa umngcipheko wesifo kunye nesifo senhliziyo. Kuyinto entle kwezempilo kangangokuba abaninzi bayithatha njengokutya kunye namayeza. Ngokwendalo, oku kukuzibaxa, kuba, ukongeza, ukutya akufuneki kuthathe indawo yonyango, kodwa kukunika umbono wenani eliphezulu lezibonelelo eziboniswa koku kutya.
Ukongeza, kukutya okunzima okungonakalisi ngokulula. Ukuba uyigcina kwindawo epholileyo, emnyama kwaye enomoya kakuhle, inokuhlala iinyanga ezininzi. Nangona kunjalo, Kuyacetyiswa ukuba uyisebenzise njengokutsha kangangoko unokufumana okuninzi kwizondlo zayo, kunye nencasa yayo..
Ngaba igalikhi iyalwa neentsholongwane?
Igalikhi ikwasetyenziselwa ukulwa iintsholongwane, ezinje ngengqele kunye nomkhuhlaneKodwa ezi zibonelelo zegalikhi zifuna uphando oluthe kratya. Kukwenzeka okufanayo ngezibonelelo zokuba zilwe ne-Alzheimer's, ukunciphisa umngcipheko womhlaza okanye ukomeleza amajoni omzimba. Ezinye zezi zifo zinobuzaza kakhulu, kwaye ithemba lobuxoki alifanelanga ukuba lenziwe de kube kuphando olushiye indawo yokuthandabuza. Ngayiphi na imeko, ayisiyombono imbi ukuyifaka ekutyeni ukuze nje kwenzeke konke oku kuyinyaniso.
Jonga eli nqaku: Unyango olubandayo. Apho uyakufumana iindlela ezininzi zokunciphisa iimpawu kunye nokubuyela kumthamo opheleleyo ngokukhawuleza.
Indlela yokulwa nomphunga ombi kwigalikhi
Igalikhi yenziwe ngothotho lwamaqhekeza amancinci abizwa ngokuba zii-clove. Olona phawu lwalo lwaziwayo livumba lalo kunye nencasa, ebangelwa yinto enamafutha ekhutshwa xa ityunyuzwa, ibizwa ngokuba yi-allicin. Njengoko unethuba lokuqinisekisa ngezihlandlo ezininzi, ivumba legalikhi lithanda ukuhlala ixesha elide emlonyeni kunendlela oyifunayo..
Ngethamsanqa, kulula kakhulu ukulwa nomphunga ongcolileyo kwigalikhi, ke oku kuphazamiseka akufuneki kube ngumqobo ekunandipheni izibonelelo zempilo ezimangalisayo zale mifuno. Esona sisombululo sithandwayo nesisebenzayo segalikhi kunye nomoya ongcolileyo ngokubanzi kukuhlafuna amagqabi eminti. Kwaye ukuba awunayo i-mint entsha esandleni, ungakhathazeki, qiniseka nje khapha ukutya kwakho okutyebileyo ngegalikhi kunye neletisi ethile okanye utye iapile yedizethi.
Kuyabonakala ukuba, ukonwabela zonke izibonelelo zegalikhi, ngakumbi ezo zihambelana negazi, kubalulekile ukuba uyixoxe kwaye uyitye iluhlaza kangangoko kunokwenzeka. I-squashing ikwayiqhinga elenza kube lula ukuchuba, ngenxa yoko kubonakala ngathi yeyona ndlela ilungileyo yokuyinyanga ngaphambi kokuyisebenzisa kwiitya zakho.
Kwenzeka ntoni kwizibonelelo zayo xa kubhakiwe okanye kubilisiwe? Ukuba okwexeshana, izibonelelo zayo zegazi azincitshiswanga, kodwa njengoko imizuzu idlula, kuya kusiba nzima ngakumbi ukugcina ukwakhiwa kwakho, ke kufuneka ithathelwe ingqalelo. Ngale ndlela, eyona ndlela ilungileyo yokuyitya iya kutyunyuzwa kwaye iluhlaza… kwaye incinci iyinzuzo. Xa kuziwa ekusebenziseni ubushushu, kuxhomekeke kwimozulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya » Izibonelelo zegalikhi